Outstanding Student (Lu-Ye Chun လူရညျခြှနျ) Project | Dr Ko Ko Gyi's Blog
ယောကျြားတံခှနျလူရညျခြှနျက မိုးစှနျတမှတျကွယျကိုဆှတျလညျး မလှတျစတမျးရမွဲလမျးတညျ့
General Ne Win’s Socialist Party Central Committee members in trouble with my discussions at the Outstanding Student Camp
Ne Win’s CEC members and I.
Luyechun (လူရည်ချွန်) Face Book Group
Homage ceremony for elderly doctors and LYC Memorabilia
Number of Outstanding Students in 25 years
လူရည်ချွန် စီမံကိန်း ပြန်စ (Please read the comments also)
လူရည်ချွန် အပန်းဖြေစခန်းများကို ပုဂံ၊ အင်းလေးနှင့် ငွေဆောင်ကမ်းခြေတို့၌ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်
“လူရည်ချွန် အကြောင်း မြန်မာရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အမေးအဖြေ”
U Win Tin, BSPP CEC and I (me)
1970 Luyechuns with Win Oo
လူရည်ချွန်သမိုင်း ပြန်ရေးရာမှာ မမေ့သင့်တဲ့ သူတွေ
တိုင်းပြည်အတွက်ဆို အသက်သေပါစေ … တစ်မျိုးသားလုံးရဲ့လူရည်ချွန် ပြည်သူ့လူရည်ချွန်တွေ……
Luyechun Nwe Nwe Tin and I
နိုင်ငံတော်အတွက် အကျိုးရှိသော လုပ်ငန်းများကို စုပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် လူရည်ချွန်ဟောင်းများ ပြန်လည်စုစည်း
Inle Khaungdaing and Ngapali Shwe War Chaing Luyechun camps
LYC Dr. Daw Nwe Nwe Tint and I (2)
လူရည်ချွန် သူငယ်ချင်းဟောင်းများ တွေ့ဆုံပွဲ (၁.၉.၂၀၁၃)
လူရည်ချွန် နှစ် ၅၀ ပြည့် ရွှေရတု 1964-1988
၁၉၆၈ လူရည်ချွန်စီမံကိန်း ဗဟိုကော်မတီ
လူရည်ချွန် ၀င်းအောင် >အမှတ်တရ
Luyechuns Outstanding Students from No9SHS/BEHS (St. Peter’s) 1966 – 1988
1972 IMM luyechuns (newspaper clip)
ဖွတ်ကလေး၊ အီကြာအော်နှင့် လူရည်အချွန်များအကြောင်း
2013 New Generation LYC List
LYC Dr. Tint Tint Kyi’s interview in Education Digest
Myanmar schools to reintroduce outstanding student programme
ဖွတ်ကလေးနှင့် အီကြာအော် လူရည်ချွန်စိတ်မွေးကြည့်ခြင်း
One LYC movie
Moe Ma Ka: လူရည်ချွန်
List of Outstanding Students from St. Peter’s No.9SHS BEHS
Dr. Tin Myo Win (NLD Daw Suu’s Physician)
1971-72 IMM luyechun Outstanding Students
My Lu Ye Chun Friend Dr. Thin Thin Lynn
Inlay Khaung Taing Luyechun Camp (now Hupin Hotel, Inlay)
Education Digest interview of Dr. Than Win in 10.10.13 issue
Interview with Dr. Nwe Nwe Tin in Education Digest Journal ဒေါ်နွဲ့ နွဲ့ တင်ကို စမ်းရေ( edu ) က တွေ့ ဆုံမေးမြန်း
ခွဲခွါခြင်းသည် တဒင်္ဂ (လူရည်ချွန်)
Luyechun Outstanding Student list
My last time or 5th. year LYC award year-book cover picture
Luyechun (1962-88) Group
မမေ့လေနဲ့ ၆၅ ငပလီ
LYC record collections list
Independence Day massage from my Australian Rohingya LYC friend
My icon Dr Nyi Nyi at Luyechun meeting
LYC Vice President at (LYC) Outstanding Student Dinner
ရွှေရတုအကြို လူရည်ချွန်များ တွေ့ဆုံ
News reports of Luyechun reunion dinner attended by LYC Vice President
Luyechun or Outstanding Students Association record book front and back cover pictures
My old picture sent from my sister
နေလင်းညီ – လူရည်ချွန် မဟုတ်သော လူရည်ချွန်များ
“လူငယ်လောက၊ တို့ လမ်းပြ မိုးဝ ဓူဝံ လူရည်ချွန်” (1)
“လူငယ်လောက၊ တို့ လမ်းပြ မိုးဝ ဓူဝံ လူရည်ချွန်” အပိုင်း(၂)
“လူငယ်လောက၊ တို့ လမ်းပြ မိုးဝ ဓူဝံ လူရည်ချွန်” အပိုင်း (၃)
“လူငယ်လောက၊ တို့ လမ်းပြ မိုးဝ ဓူဝံ လူရည်ချွန်” အပိုင်း (၄)
Great Luyechun Monk Ashin Sandadika အရှင်ဆန္ဒာဓိက
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်း စောမောင်၏ သမီး ကေသီစောက လူရည်ချွန်ပါ
၁၉၇၆ ခုနှ စ် (၁၃) ကြိမ်မြောက် လူရည်ချွန် စီမံ ကိန်းအတွေ့ အကြုံ
၁၉၇၇ ခုနှစ် (၁၄) ကြိ မ်မြောက် လူရည်ချွန်စီ မံ ကိန်းငပလီရွှေဝါဂျိုင်စခန်း
လူရည်ချွန် ကြံခိုင်စွမ်းရည် အတွက် ပြိုင်ကြရတဲ့အခါ စံချိန်တွေ
လူရည်ချွန် ဘက်စုံထူးချွန် စီမံကိန်း
‘လူရည်ချွန်’ MRTV 1
‘လူရည်ချွန်’ MRTV 2
New Generation LYCs
Luyechuns stretching hands to new generation Outstanding Students
LYCs with General Ne Win and Daw Khin May Than
Luyechun or outstanding students and Myanmar President
President’s dinner လူရည်ချွန် (၁၉၆၄- ၈၈) အဖွဲ့
Luyechuns are everywhere but we have the brotherhood spirit of “One for all, all for one”
လူရည်ချွန်တွေလေ့ကျင့်၊ ပျိုးထောင်မွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတော်
လူရည်ချွန် ဘက်စုံထူးချွန် စီမံကိန်း .
Aung Naing Moe “ကျွန်ုပ်ကလည်း အလွတ်ကျက်ရမည်ဆို လာထား။ လူရည်ချွန်စာမေးပွဲမှာလည်း ဒါမျိုးတွေသာမေး၍ အချောင်လူရည်ချွန် ဖြစ်ခဲ့ရသေးသည်”
Lu Ye Chun or Outstanding Student Renaissance
We must dare to dream an almost impossible dream
Thanks my parents, grand parents and relatives for pulling me away from BSPP Propaganda mirage bait
My LYC photos at IMM (now UMM) Golden Jubilee cerebration
LYC Dr Soe Aung and sister Khin Khin Tint မောင်စိုးအောင် ခင်ခင်တင့် လူရည်ချွန် မောင်နှမနှစ်ဦး
Will my friend Luyechun Dr. Tin Myo Win become the President of Myanmar? NLD သမ္မတလောင်း ဘယ်သူဖြစ်မလဲ?
လူရည်ချွန်ဆိုတာငယ်အိပ်မက်တွေပါ။၁၅ ၁၆ ၁၇ ဆယ်ကျော်သက်အရောင်မဆိုးခင်ကတော့အားလုံးဟာတသားတည်းပဲ။ကြိးလာတော့တချိ့ကခိုးသား၅၀၀ဆီရောက်တချိ့ကရသေ့ကျောင်းသင်ခန်းကိုရောက်
ဆရာကြီးဦးဘသော် Our Headmaster U Ba Thaw
The order not to wear any badges on the right side of the chest, other than the Maw Kun Won badge
လူမျိုးစွဲဘာသာစွဲ မရှိဘဲ စစ်မှန်တဲ့ မေတ္တာတရားထွန်းကားရေးအတွက် စာများများဖတ်ဖို့တုိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ ဆရာတော်အရှင်ဆန္ဒာဓိက
Vice-President attends pre-Golden Jubilee dinner of Luyechun outstanding students
Outstanding students enjoy festivities at golden jubilee get-together
Video of Luyechun Former Outstanding Students’ Meeting
New generation Luyechun or Outstanding Students
Pre-Matriculation Exam: New generation Outstanding Students Awarded
LIVING LEGENDS: LUYECHUN MEMBERS IN PUBLIC SERVICE
Sad to see the metamorphosis ofawise LYC monk intoaracist bigot
My Luyechun friend became disillusioned with LYC after U Thein Sein tried to hijack the Scout and LYC projects
Human Rights Activist LYC U Thein Than Oo and future ICC Criminal General Ye Myint at the Upper-Burma LYC Reunion
My two great lecturers in Medicine
Just another Luyechun Nostalgia in December 2017
Rakhine Lawyer Than Mg, an IDIOT RACIST Lu Ye Chun should be summoned to ICC
LYC Magazine 2018
အရှင်ဆန္ဒာဓိက – မုန်းစွဲက ဘယ်လောက် ကြောက်စရာကောင်းလဲ
လူရည်ချွန် (၁၉၆၄-၈၈) အဖွဲ့ နှင့် မျိုးဆက်သစ်လူရည်ချွန်များ စုပေါင်းပါဝင်သော ကွန်ရက် တစ်ခု
Maungdaw Rohingya Luyechun A.H. Kamal
လူရည်ချွန် စီမံကိန်း နဲ့ မန္တလေးက ကျောင်းသားတယောက်
Luyechun (Dr) Soe Aung (Australia) at 9th Standard
My first LOVE i.e. camera was my companion in LYC or Outstanding Student Camps for FIVE YEARS
Luyechun or Outstanding Students and San-pya Loke-thars or Model Workers are actually the ‘Heroes’ created by General Ne Win’s Burma Socialist Party to use for its benefits
Myanmar, our nation, our motherland, will bring peace to ALL people: with justice & freedom ha ha
လူရည်ချွန် (၁၉၆၄-၁၉၈၈)အဖွဲ့ Luyechun (1964-1988) Association
New Generation Luyechun
ယောက်ျားတံခွန်လူရည်ချွန်က… မိုးစွန်တမွတ်ကြယ်ကိုဆွတ်လည်း မလွတ်စတမ်းရမြဲလမ်းတည့်
ဒုတိယသမ္မတ ရာထူးကို ဒေါက်တာလိတ်ရော ဒေါက်တာနွဲ့တင်ရော ငြင်းပယ်ခဲ့
Indian version of LYC, Student of the Year
ဗိုလ်တထောင်သတင်းစာ – ၁၉၇၁ လူရည်ချွန် စာရင်းများထုတ်ပြန်ကျေညာ
I was expelled from LYC FB Group because I wrote about the basic cause of Anti- Rohingya Riots
Lu Ye Chun Reunion dinner
၂၀၁၄ ခုနစ် နိုင်ငံတော်သမ္မကြီး မှ မျိုးဆက်သစ်လူရည်ချွန်များ သို့ ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲ တွင် လူရည်ချွန်မျိုးဆက် သစ်/ ဟောင်း များ ပေါင်းစည်းစုံညီ
လူရညျခြှနျ(၁၉၆၄-၈၈)အဖှဲ့ (ဗဟို)၏ နှဈပတျလညျ အစညျးအဝေး အခမျးအနား အစီအစဉျ
ပရျောဖကျဆာသမားတျောကွီးဒေါကျတာတငျ့တငျ့ကွညျရဲ့ ခပျကွမျးကွမျးခေါငျးလောငျးထိုးချေါသံနဲ့ ..’ နောကျဆုံးရထား ‘
ဒေါကျတာညီညီ ၊၉၂ နှဈ၊ နယူးယောကျမွို့မှာ ဆုံး
လူရညျ​ခြှနျ​ camp ကို​ရောကျ​လာတဲ့ ဗိုလျ​ခြုပျ​ ကွီး ဟာ လူရညျ​ခြှနျ​ ​တှကေို လကျ​ဆှဲနူတျ​ဆကျ​ရာက​နေ ပနျ​ခြာ​ကြောငျး​သား ​ရှေ့​ရောကျ​ ​တော့လကျ​မဆှဲ​တော့ ဘဲ ပညာ​ရေး ၀နျ​ကွီး ကိုစိတျ​ ဆိုးတယျ
One Response to “Outstanding Student (Lu-Ye Chun လူရညျခြှနျ) Project”
December 1, 2021 at 10:04 am | Reply
I was one of the admins in Outstanding Student Luyechun FB group. There were Vice President, Health Minister, Deputy Ministers, DGs, Professors, Medical Specialists, Lawyers, Engineers,6Generals etc in that group, Crème De La Crème of Myanmar society. They kicked me out when I posted the Thida Htwe murder case, how it was exploited to create Anti-Rohingya to divert the attention of public.
U Aung Htay commented in FB post of my comment.